Siyaasa Itoophiyaa: Dhaabni mormituu naannoo Tigraay biyyatti deebi'uufi - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Hundeessaa ABUT duraanii Dr. Aragaawii Barihee
Paartiin Walta'iinsa Tigiraay Dimokiraasii Biyyaalessaaf (TAND) jedhamu Dr. Aragawi Bariheen hogganamu waggoota 23 booda gara biyyaatti galee qabsoo itti fufuuf qophii tahuu beeksise.
Kanaan dura irra deddeebiin gara biyyaatti gallee karaa dimokiratawaa qabsaa'uuf gaaffii dhiyeessaa turrus, gaggessitoota duraaniin fudhatama hin arganne jedhu Dr. Aragawiin.
"Haalli siyaasaa amma biyya keessa jiru toora nuyi irratti wal dhabnee biyyaa bane waan taheef amma gara biyyaatti galuuf qophi xumurreerra," jedhu.
Kanaan dura akka gurmuu paartii siyaasaattis tahe dhuunfaatti gara biyyaatti galuuf yaalii taasisaa turrus mootummaan haaromsa kana dura ture, amala mootummaa abbaa irree waan qabuuf milkaa'uu hin dandeenye jedhan.
Dabalataan ''amma Itoophiyaaa keessatti jijjiramni haaraan isa dhufe paartilee mormitootaa kan dhiibu osoo hin taane, akka dorgomtootaatti kan ilaaluu fi mirgasaanii eegudha,'' jechuun dubbatu.
Hanga yoonaa maalitti turan?
Paartiichi erga hundaa'ee waggota 23 kan lakkofsise tahus hanga ammatti beekamtii guddaa hin arganne. Sababa kuni ta'eef yoo ibsa;
''Ukkamsaatu ture, sirna gaggeesitoota Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigiraay duraaniin, Tigiraay keessa dhaabni tokkollee akka hin seenne gochaa turan," jedhu.
"Odeeffannoo uummata biraan akka hin geenyeef gaazexaanillee dhorkamaa turre. Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigiraay fi uummanni Tigiraay tokkodha jechuun waan tokko hin taane odeessaa turan."
"Ballessa isaaniin uummatichis balaaleffatame. balleessaa hunda kan raawwate gaggessitoota Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigiraay duraaniiti, uummatichis akkuma saba Itoophiyaa kaanii ukkamfamee jiraataa ture," jedhu.
Dabalataan, nuyi jalqaba akka Itoophiyaatti dhaabanna jenne yoo morminu warri tayitarra turan Tigirayiin kutuuf yaadaa turan garuu erga nuyi biyyaa baanee waan taayitaa guutuu argataniif akka biyyaatti itti fakkeessuun bulchaa turan jechuun dubbatu.
Jiijirama biyyatti dhufe kana fagoo taa'anii ceepha'uu osoo hin taane akka dhaaba tokkootti keessatti hirmaachuun uummata Itoophiyaa tokko goochuun karaa dimokiraatawaa taheen hojjechuuf qophii tahuu himaniiru.
Addi Bilisa Baasaa ogaadeenis haalli biyyatti uumamaa jiru karaa nagana mootummaa waliin mari'achuuf kan haala mijeesseef tahuu himeera.
ONLF mootummaa waliin nan mariyadha jedhe